Somaliland oo ka hadashay siyaasadda cusub ee Maraykanka ee ku wajahan Soomaaliya, iyo joojintiisa la taacaamulidda maamullada maxalliga ah. – Radio Daljir
Janaayo 19, 2013 1:12 g 0
Hargeysa, Jan 19 – Maamulka Somaliland ayaa si rasmi ah uga hadlay aragtidiisa ku saabsan go’aankii dawladda Maraykanku wax uga baddashay qorshaheeda siyaasadeed ee ku aaddan Soomaaliya, kuna aqoonsatay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo dhinaca kalena shaacisay joojinta la tacaamulidda maamul goboleeddada.
Kulan ballaaran oo maanta ay iskugu yimaadeen hoggaanno ka tirsan saddexda xisbi-qaran ee Somaliland iyo siyaasiyiin waaweyn oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay Somaliland, ayaa looga hadlay mawqifka maamulka iyo sida ay ula muuqato saamaynta arrintaani ku yeelan karto.
Madaxdii xisbi iyo hoggaannadii siyaasadeed ee shirkaasi ka qaybgalay ayaa aragti kala duwanaan ka muujiyey raadka iyo saamaynta siyaasaddaan cusubi ku yeelan karto Somaliland, inkastoo ay si ballaaran u xoogeeyeen badankoodu tallaabadaasi in aysan ahayn mid wax yeelayn karta gooni-isku-taagga Somaliland.
Guddoomiye kuxigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee Kulmiye, ahna mudane ka tirsan wakiillada Somaliland Maxamed Yuusuf Axmed ‘Waabeeyo’ oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii shirka u matalayey Kulmiye, ayaa sheegay warka Maraykanku in uusan ahayn mid quseeya Somaliland, duniduna la socoto kala duwanaanta Somaliland iyo Soomaaliya sida uu hadalkiisa u dhigay.
Isla kulanka madax ka tirsan xisbiyada iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay M/weyne kuixgeenkii hore Axmed Yuusuf Yaasiin oo ka hadlay, ayaa sheegay duullimaasiyadda cusub ee Maraykanku in aysan ahayn mid u taalla Somaliland, hase ahaatee waxay muujiyeen walwal cabsiyeed oo laga qabi karo hal il ku eegidda Somaliland iyo Soomaaliya, waxayna beesha caalamka ka codsadeen xaaladda in aan la isku murgin, waxna loo dhimin xorriyadda iyo rabidda ummadda reer Somaliland.
Hadalka hoggaannada siyaasadeed ee Somaliland ayaa imaanaya iyadoo shalay dawladda Maraykanku shaacisay in ay dawlad rasmi ah u aqoonsatay federaalka Soomaaliya, dhinaca kalena ay joojisay hannaankii labada waddo lahaa ee Maraykanku ku eegi jiray xaaladda Soomaaliya, taasoo ogalaanaysa federaalka iyo maamullada maxalliga ah midba dhinacooda in loola tacaamulo.
Maamulka deegaanka dhabbad ee gobolka Galguduud oo ka hadlay saamaynta dhawaan ka dhacay deegaanka.